Onollo: uLawulo lweMidiya yoLuntu kwi-Ecommerce | Martech Zone
Inkampani yam ibincedisa abathengi abambalwa ngokumilisela nangokwandisa ezabo Shopify iinzame zokuthengisa kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngenxa yokuba i-Shopify inentengiso enkulu kumzi mveliso we-e-commerce, uyakufumanisa ukuba kukho itoni yokudityaniswa kwemveliso eyenza ukuba ubomi bube lula kubathengisi.
Ukuthengiswa kwezorhwebo kwezentlalo e-US kuya kukhula ngaphezulu kwe-35% ukugqitha kwi-36 yezigidigidi kwi-2021.
Ukukhula korhwebo lwezentlalo yindibaniselwano yeenkqubo zeenqwelo zokulwa ezihlangeneyo ukuba amaqonga eendaba ezentlalo ayadibanisa kunye nokuziphatha komthengi okutshintsha kakhulu kunyaka ophelileyo. Unoko engqondweni, iinkampani ze-e-commerce zinokunqwenela ukwabelana nokwazisa ngemveliso kunye namaphulo abo ngokulula. Iinkqubo zolawulo lweendaba zosasazo zihlala zingadibanisi ukubamba kunye nokulandelela uluhlu lwakho kunye nokuthengisa ngemithombo yeendaba… kude kube ngoku.
Onollo: Ishedyuli kunye nokwandisa iZithuba zoRhwebo loLuntu
Nantsi imbonakalo entle yevidiyo:
U-Onollo unikezela ngeqonga elilumkileyo, elidityanisiweyo lokulawulwa kweendaba zosasazo kwiimfuno zakho zorhwebo, kubandakanya:
Umdibaniso we-Ecommerce -Ukudityaniswa kwemveliso kunye Shopify, Magento, WooCommerce, yaye IBgcommerce.
Ukuthunyelwa kweMveliso -Ukufikelela, ukuhlela, kunye nokupapasha idatha yekhathalogu yemveliso ngonqakrazo olumbalwa. Onollo ukhupha idatha yemveliso kwivenkile yakho ngonqakrazo olunye nje. Unokwenza izinto ezithunyelwe kwimithombo yeendaba zentlalo ngaphandle kokukhuphela imifanekiso, ukukopa-ukunamathisela amagama emveliso, iinkcazo, amaxabiso, ii-URL, njalo njalo. Qhuba ukugcwala kwezinto eziphilayo simahla. Xelela umhlaba ngento oyithengisayo.
Ikhalenda yeNtlalontle -Yila ukuthunyelwa kwimidiya yoluntu ngalo naluphi na uhlobo ngokusebenzisa idatha yemveliso kwivenkile yakho. Ishedyuli kunye nokulandela umkhondo kuyo yonke imithombo yakho yemidiya yoluntu kwikhalenda ka-Onollo.
Ucwangciso oluCwangcisiweyo -I-algorithm ye-AI ye-Onollo ecebisa elona xesha lilungileyo kwisithuba sakho esilandelayo. Akusekho ukuqikelela. Imidiya yoluntu kufuneka ibe lula.
I-Autopilot (uphawu loMlingo) - Gcina ukuthumela ngelixa uphumle. I-Autopilot iya kukhetha kwaye ipapashe umxholo ofanelekileyo ngexesha elifanelekileyo kuzo zonke iinethiwekhi zemidiya yoluntu.
Bhalisela iAkhawunti yasimahla ye-Onollo
tags: AmazonBigCommerceebayFacebookuphandoLinkedInMagentoOnolloTwilleythengaImidiya yokuncokolaI-autopost yemidiya yoluntuikhalenda yemidiya yoluntuulawulo lweendaba ezentlaloUkucwangciswa kweendaba ezentlaloTikTokTwitterNdinqwenelawixwoocommerce
Ulujonga njani uPhando lwakho lweOrganic (SEO)